Naya course » प्रदेश ५ का जनतालाई बुटवल दुख्छ कि भालुवाङ्ग ? प्रदेश ५ का जनतालाई बुटवल दुख्छ कि भालुवाङ्ग ? – Naya course
प्रदेश राजधानी तोक्ने काम प्रदेश संसदको हो, सडकको होइन
काठमाडौं / प्रदेश ५ को सरकारले दाङ्गको भालुवाङ्गलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै यतिबेला बुटवल र भालुवाङ्ग चर्चामा छन । राप्ती गाउँपालिकामा रहेको भालुवाङ्ग बजारलाई राजधानी बनाउन हुन्छ भन्ने र हुँदैन भन्ने पक्ष र विपक्षको बहसमा प्रदेश सांसद, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु सहित नेकपाका अग्रज नेताहरुकापनि विभाजित अभिव्यक्तिहरु सतहमा आउन थालेका छन् । यसका लागि सडक र सदनमा आन्दोलन पनि शुरु भएको छ । तर यो सडक र सदनको आन्दोलनको विषय नभएर संवैधानिक र कानुनी विषय हो ।
हिजो प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले दाङ्गको भालुवाङ्ग क्षेत्रलाई प्रादेशिक राजधानी तोक्ने निर्णय गर्दा बुटवल क्षेत्रमा एकाएक तनाव उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चढेको गाडीमा ढुंगामुडाले आक्रमण गरियो । आज प्रदेशसभाको बैठकमा काँग्रेसका सांसदहरुले टेबुल कुर्सी तोडफोड गर्ने गैरजिम्मेवारी गतिविधि गरेका छन् । ढुंगामुढाले प्रदेशको राजधानी तोकिने काम कदापी प्रभावित हुनु हुदैन । प्रदेशको राजधानी भालुवाङ्ग भएपनि बुटबल भएपनि यसले प्रदेश नं। ५ का जनताको पहुँच र पायकलाई अर्थात भौगोलिक केन्द्र पर्छ की पर्दैन, त्यसको बहस गरिनु पर्दछ । त्यो पनि सडकमा होइन, प्रादेशिक संसदमा । यसको अधिकार अव जनताले चुनेका सांसद र सरकारको बिषय हो, सडकको होइन ।
मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छ, त्यसैले पनि यो आन्दोलन गर्ने समय होइन । बुटबलमा प्रदेश राजधानीको बिषयलाई लिएर भएको आन्दोलन ततकाल रोकिनुपर्दछ । दाङ्गको भालुवाङ्ग भएपनि बुटबल भएपनि यो प्रदेश ५ को संसदको सहमति वा लोकतान्त्रिक विधि अन्र्तगत तोकिने बिषय हो । प्रदेश राजधानी तोकिने बिषयमा बुटबल र भालुवाङ्गको आँखाले मात्रै नभएर समग्र देशकोे सिंगो आँखाले पनि हेरिनु पर्दछ । तर अहिले प्रदेशको राजधानी भालुवाङ्ग तोक्दा बुटबललाई दुख्ने र बुटवल तोक्द भालुवाङ्ग दुख्ने हुनु हुदैन । यो त प्रदेश ५ हो, त्यसैले बुटवल दुख्दा भालुवाङ्ग पनि दुख्नु पर्छ । भालुवाङ्ग दुख्दा बुटवल पनि दुख्नु पर्छ । बुटवलको प्रतिस्पर्धी भालुवाङ्ग होइन, नत भालुवाङ्ग को प्रतिस्पर्धी बुटवल हो । यो त भौगोलिक केन्द्र, पहुँचमा आधारित भएर तोकिनु पर्दछ । यो जात्रा प्रर्दशन गर्ने बिषय होइन, संविधानिक अधिकारको जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने महत्वपुर्ण निर्णय हो । आशा गरौ, यो अधिकारको प्रदेश ५ ले सही कार्यान्वयन गर्नेछ ।चक्रपथबाट साभार